बाढीले ललितपुरको खानेपानीमा ३ करोड ७१ लाखको क्षति «
बाढीले ललितपुरको खानेपानीमा ३ करोड ७१ लाखको क्षति
केही दिनअघि काठमाडौं उपत्यकामा आएको बाढीका कारण ललितपुर क्षेत्रमा खानेपानीमा ३ करोड ७१ लाख रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । बाढीले खानेपानीको मुहान र पाइपमा बढी क्षति भएको हो ।
बाढीले ललितपुरको नल्लु, देवकी र बासुकी मुहानमा र फर्पिङमा पहिरो गएका कारण केही दिनदेखि ललितपुर क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । ललितपुर क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव चर्किंदै गएपछि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले देवकी र बासुकी मुहानको मर्मतलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. सञ्जिवविक्रम राणाले बाढीबाट मुहान र पाइपलाइनमा गरी करिब ३ करोड ७१ लाख रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिए । बाढीका कारण देवकी र बासुकी मुहानमा पुरै क्षति पु-याएको थियो भने नल्लुमा करिब साढे २ किलोमिटर पाइप लाइन बगाएको थियो । केयुकेएलको ललितपुर शाखाका प्रमुख डा. डोलप्रसाद चापागाईंले तत्कालका लागि देवकी र बासुकी मुहानको मर्मत गरी करिब ५० प्रतिशत पानी चापागाउँको रिजर्भवायर ट्यांकीमा पानी खसाल्न सकिएको जानकारी दिए । “तत्काल देवकी र बासुकी मुहानको मर्मत गरिरहेका छौं । यी दुई मुहानको मर्मत गरेर भएपनि ललितपुर क्षेत्रमा पानी वितरण गर्ने तयारी गर्दैछौं” शाखा प्रमुख चापागाईंले भने, “उता फर्पिङमा पहिरोले मुहान र पाइप बगाएर पुरै क्षति पु-यायो । त्यसको पनि मर्मत गर्दैछौं । तत्कालका लागि २-३ दिनभित्र नै खानेपानीको आपूर्ति सहज हुन्छ ।”
केयुकेएलले फर्पिङबाट पानी पम्पिङ गरी ललितपुरका विभिन्न सहरबजारमा खानेपानी वितरण गर्ने गरेको छ भने देवकी, बासुकी र नल्लुबाट आउने पानी ललितपुरको चापागाउँस्थित रिजर्भवायर ट्यांकीमा खसाली त्यहीँबाटै वितरण गर्ने गरेको छ । फर्पिङबाट पम्पिङ गरेर ल्याइएको पानी ललितपुरका पश्चिमतिरका केही ठाउँहरूमा समेत वितरण गर्ने गरिएको छ ।